“ပညာရေးအကယ်ဒမီ ရှေ့ခရီး” – ၀ီရသူ
မင်းကွန်း ပုထိုးတော်ကြီး ပညာဒါနစာသင်ကျောင်းဆောင်းပါး
စာရေးသူမှာ ပညာဒါနစာသင်ကျောင်း သုံးကျောင်းရှိပါသည်။ လောကအလင်း၊ မန်းမဟော်သဓာနှင့် ပညာရေးအကယ်ဒမီတို့ ဖြစ်ပါသည်။ လောကအလင်းပညာဒါနကျူရှင်ကျောင်းကို ၂၀၁၂ ခုနှစ်က တည်ထောင်ခဲ့ပြီး မန္တလေး၊ ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ်၊ မြရည်နန္ဒာရပ်ကွက်မှာ တည်ရှိပါသည်။ တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းသီးသန့် ကျူရှင်ကျောင်းဖြစ်ပါသည်။ ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ပညာသင်နှစ်မှ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင်နှစ်အထိ အောင်မြင်သူပေါင်း ၁၂၄ဦး ရှိခဲ့ပါသည်။ ယခု ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ပညာသင်နှစ်မှာလည်း ဝင်ရောက်ဖြေဆိုနေကြပါသည်။
ဒုတိယကျောင်းဖြစ်သော မန်းမဟော်သဓာမှာ ပုသိမ်ကြီးမြို့နယ်၊ ကျောက်ချောကျေးရွာမှာ တည်ရှိပါသည်။ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ပညာသင်နှစ်မှာ စတင်ဖွင့်လှစ်ကာ ၉တန်း ၁၀တန်း ကျောင်းသူကျောင်းသားများ လက်ခံထားပါသည်။ မန်းမဟော်သဓာ အမျိုးသားရေးကိုယ်ပိုင်အထက်တန်းကျောင်းတော်ကြီး အကောင်အထည်မပေါ်သေးခင် ကျေးရွာလိုအပ်ချက်အရ ဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ နာမည်အပြည့်အစုံမှာ “ကျောက်ချောရွာ ပညာဒါနကျူရှင်ကျောင်း” ဖြစ်ပါသည်။ စတင်တည်ထောင်ခါစဖြစ်၍ အောင်ချက်မကောင်းသေးပါ။
တတိယကျောင်းဖြစ်သော ပညာရေးအကယ်ဒမီကား စစ်ကိုင်းမြို့နယ်၊ မင်းကွန်းတောင်ရိုး၊ ပုထိုးတော်ကြီးအနီးမှာ တည်ရှိပါသည်။ ပဉ္စမတန်းမှ ဒသမတန်းအထိ အလယ်တန်း အထက်တန်း ကျောင်းသူကျောင်းသားများ လက်ခံထားပါသည်။ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင်နှစ်မှာ ဆယ်တန်း ၁၂ဦး အောင်မြင်ပါသည်။ နာမည်အပြည့်အစုံမှာ “မင်းကွန်းပုထိုးတော်ကြီး ပညာရေးအကယ်ဒမီ” ဖြစ်ပါသည်။ ရည်ရွယ်ချက်မှာ မူလတန်း အလယ်တန်း အောင်မြင်ပြီး ဆက်လက်ကျောင်းမနေနိုင်သော ရွာသူရွာသား နွမ်းပါးကလေးငယ်များလည်း သူဌေးသားသမီးများနှင့်တန်းတူ အဆင့်အတန်းမြင့်မြင့် ပညာသင်ယူနိုင်ရေးပင် ဖြစ်ပါသည်။ သို့ဖြစ်၍ ကျောင်းအိပ်ကျောင်းစား ဆရာ ဆရာမများ ကျောင်းသူကျောင်းသားများအား နေ့စဉ် ထမင်းသုံးနပ် ကျွေးမွေးရကာ ပညာရေး ကျန်းမာရေး စားရေး နေရေး အလုံးစုံတာဝန်ယူရပါသည်။ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင်နှစ်မှာ စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီး ဦးရေ တစ်ရာ့ခြောက်ဆယ်ကျော် ရှိပါသည်။ ယခုနှစ် ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ပညာသင်နှစ်တွင် ဦးရေ သုံးရာကျော်ရှိရာ ဆယ်တန်းကျောင်းသားကျောင်းသူပေါင်း တစ်ရာ့ခုနစ်ဆယ်ကျော် ရှိပါသည်။ နေ့စဉ် ထမင်းသုံးနပ်အတွက် ဆန်လေးပိုင်း ကုန်ကျပြီး ဝန်ထမ်းလစာ၊ ရိက္ခာ၊ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေးအတွက် လစဉ် သိန်း ခုနစ်ဆယ်ကျော်မှ ကိုးဆယ်ကျော်အထိ ကုန်ကျပါသည်။
အမာခံလှူဒါန်းမည့် ဒါယကာ ဒါယိကာမများ မရှိခြင်း၊ ငွေပဒေသာပင်စိုက်ထူ ဘဏ်အပ်ထားမှုမရှိခြင်းတို့ကြောင့် စာရေးသူ၏ တပည့်ဒကာ ဒကာမများက ပညာရေးအကယ်ဒမီကျောင်းတော်ကြီးအတွက် စိုးရိမ်ပူပန်ခဲ့ကြပါသည်။ စာရေးသူကလည်း သူ့နည်းသူ့ဟန်ဖြင့် သူ့ဘာသာဖြစ်မြောက်သွားလိမ့်မည်ဟု ယုံကြည်ထားသည့်အားလျော်စွာ စာရေးသူ တရားပွဲပြန်ပွင့်စအခါနှင့် ကြုံကြိုက်၍ တရားပွဲများစိပ်ကာ ဓမ္မပူဇာများ ရရှိလာသဖြင့် ပထမခြေလှမ်း အောင်မြင်နိုင်ခဲ့ပါသည်။ ဒကာ ဒကာမအင်အား မတောင့်တင်းဘဲ ပရဟိတဘကကျောင်းကြီးကို တာဝန်ယူဖွင့်လှစ်ထားခြင်းသည် စာသင်တိုက်တစ်တိုက် ဖွင့်လှစ်ရခြင်းထက် တာဝန်ကြီးလှပါသည်။ စာရေးသူမှာ စာချပြီးတိုင်း မင်းကွန်းသို့ သွားရပါသည်။ ရိက္ခာအတွက်လည်း ကိုယ်တိုင်စီမံကာ အမြဲပို့ပေးရပါသည်။ သင်ရိုးစာအုပ်များ၊ အထူးထုတ်စာအုပ်များ၊ ဆရာကိုင်စာအုပ်များ အမြဲဝယ်ယူပို့ပေးနေရပါသည်။
ကလေးများကို နေ့စဉ်ပြုစုပျိုးထောင်ရသဖြင့် ကိုယ့်သားသမီးအလား သံယောဇဉ်ထားခဲ့ရပါသည်။ တရားဟောကြွသည့်အခါတိုင်း ‘ကျုပ်က အရင်လို လူပျိုလူလွတ်မဟုတ်တော့ဘူးဗျ၊ သားသားမီးမီးတွေ ရနေပြီ’ဟု ဒကာ ဒကာမများကို ပြောပြတတ်သလို စားအိုးကြီးသည့် မိသားစုများ ငြီးငြူသည်နှင့် ကြုံရလျှင်လည်း ‘ခင်ဗျားတို့ စားအိုးကြီးတာ ဘာဟုတ်သေးလို့လဲ၊ ကျုပ်စားအိုးက လူသုံးရာကျော်ကြီးတောင်’ဟု မော်ကြွားတတ်ပါသည်။
၂၀၁၉-၂၀၂၀ ပညာသင်နှစ် နှစ်စကာလပင် ရှိပါသေးသည်။ တစ်နည်းအားဖြင့် ကျောင်းဖွင့်ပြီး၍ နှစ်လသာရှိပါသေးသည်။ သားသားမီးမီးများနှင့် ဝေးရာသို့ ရောက်ရှိခဲ့ရပါသည်။ ပဒေသာပင်လည်း မရှိ၊ အမာခံ ဒကာ ဒကာမလည်း မရှိ၊ ဓမ္မပူဇာများလည်း မရှိတော့သဖြင့် ကျောင်းတော်ကြီး ပိတ်ရတော့မည့်အဖြစ်ဆိုးနှင့် ကြုံခဲ့ရပါသည်။ စိုးရိမ်မှုလွန်ကဲသော မိဘများက ပြန်ခေါ်သွား၍ ကျောင်းသား ဆယ့်လေးငါးဦး ရွာပြန်သွားကြပါသည်။ စာရေးသူကလည်း အားလုံးတာဝန်ယူကြောင်းနှင့် အာမခံကြောင်း ပြောပြထားပြီး အားလုံးပြည့်စုံအောင် စီမံပေးနိုင်ခဲ့ပါသည်။ ပရဟိတအဖွဲ့အစည်းများ၊ အမျိုးသားရေးအင်အားစုများ၊ မဘသညီနောင်မိသားစုများ၏ ကြည့်ရှုစောင့်ရှောက်မှုကြောင့် လွယ်ကူချောမောစွာပင် ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ပညာသင်နှစ်ကို ဖြတ်သန်းနိုင်ခဲ့ပါသည်။ ယခုဆိုလျှင် ဆယ်တန်းစာမေးပွဲများပင် ဖြေဆိုနေကြပေပြီတည်း။
နိုင်ငံရေးနှင့် ပရဟိတ မည်သည့်အရာက ခံခဲသနည်း ဤမေးခွန်းကို အတွေ့အကြုံက အဖြေပေးနိုင်ခဲ့ပေသည်။ စာရေးသူသည် ၂၀၁၃ ခုနှစ်မှစ၍ နဂါးနီစုဘူးများကို တည်ထောင်ခဲ့ပါသည်။ ဆင်းရဲနွမ်းပါးပြည်သူများ အထူးသဖြင့် အိုးပိုင်အိမ်ပိုင်မရှိသေးသည့် ကျူးကျော်အိမ်နေပြည်သူများအား ငွေကြေးအရင်းအနှီးထုတ်ပေးပြီး ငွေစုခိုင်းသည့်စနစ် ဖြစ်ပါသည်။ ပြည်သူအများစုက သစ္စာရှိကြ၊ အလုပ်ကြိုးစားကြသော်လည်း ရပ်ကွက်နေ ပရဟိတအားသန်သူများ၏ အကူအညီမရ၍ စုဘူးများ တိုးချဲ့နိုင်ခြင်း မရှိခဲ့ပါ။ ရပ်ကွက်အီးစီဟုခေါ်ဆိုအပ်သော နဂါးနီစုဘူးအဖွဲ့ အကြီးအကဲများ၏ တာဝန်ကလည်း မလွယ်ကူလှပါ။ နေ့စဉ်နေ့တိုင်း ငွေကောက်ခံရသည်။ စာရင်းပြုစုရသည်။ တစ်ပတ်တစ်ခါ မစိုးရိမ်သို့ လာရောက်ငွေအပ်နှံရသည်။ ကိုယ့်ထမင်းကိုယ်စား ကိုယ့်စက်ဆီကိုယ်ဝယ်ထည့်ရသည်။ သည်ကြားထဲ အသင်းဝင်များ အလိုမကျ၍ ရန်တွေ့ကြသည်နှင့်လည်း ကြုံရ၏။ အချို့ ငွေမစုနိုင်သည့်အိမ်များသို့ ကိုယ်တိုင်သွား၍လည်း အကြွေးတောင်းရ၏။ ဤကဲ့သို့ ပြည်သူလူထုအပေါ် စေတနာထား၍ အနစ်နာခံကြသော်လည်း မည်သည့်သတင်းဌာနကမှ မရေးသားကြ၊ မည်သည့်ရုပ်သံမီဒီယာကမှ ရိုက်ကူးထုတ်လွှင့်ပေးခြင်းမျိုးလည်း မရှိ၊ ဆုတံဆိပ်တွေရဖို့၊ စပွန်ဆာတွေပေါ်ဖို့၊ ဒိုနာတွေ လာဖို့ဆိုသည်မှာ ဝေလာမှဝေးပင်။ ချီးမြှင့်မြှောက်စား သူကောင်းအပြုခံရဖိုိ့ဆိုသည်မှာ ပို၍ပင်ဝေးပေသေးသည်။ ထို့ကြောင့်လည်း ရပ်ကွက်အီးစီများ တစ်ဖွဲ့ပြီးတစ်ဖွဲ့ နုတ်ထွက်သွားကာ ယခုဆိုလျှင် နဂါးနီစုဘူး သုံးလေးဘူးမျှသာ ကျန်ပေတော့သည်။
၂၀၁၃ ခုနှစ် ရန်ကုန်မြို့တွင်းတစ်နေရာ ဆင်းရဲသူဆင်းရဲသားပေါများသည့် မြို့နယ်တစ်ခုတွင် တရားဟောရပါသည်။ ဓမ္မပူဇာအလှူငွေ များများစားစားမဟုတ်လှပါ။ ငွေစက္ကူအရွက်ကြီးဆို၍ ငါးရာတန် တစ်ထောင်ကျပ်တန်များသာ အနည်းငယ်ပါသည်ကို တွေ့ရပါသည်။ အများစုမှာ အရွက်သေးများ ဖြစ်ပါသည်။ ငွေစက္ကူအနွမ်းလေးများကိုကြည့်၍ စိတ်မကောင်းဖြစ်မိပါသည်။ ဤသို့ဖြင့် ၎င်းရပ်ကွက်နေပြည်သူများအတွက် တစ်ခုခုလုပ်ပေးရလျှင် ကောင်းမည်ဆိုသည့်အတွေးနှင့်အတူ နဂါးနီစုဘူးအသင်းတည်ထောင်ပေးဖို့ စိတ်ကူးပေါ်ခဲ့ပါသည်။ တရားပွဲပင့်သူများကိုခေါ်၍ ၎င်းအစီအစဉ်ကိုပြောပြရာ စည်းဝေးတိုင်ပင်ဦးမည်ဟုဆိုကာ ယနေ့အထိ ပေါ်မလာကြတော့ပါ။ စာရေးသူက ဖုန်းဆက်မေးသည့်အခါတိုင်းလည်း ရှောင်လွှဲဖြေသွားကြသည်နှင့်သာ ကြုံရပါသည်။ အဆိုပါတရားပွဲပင့်သူများသည် ပါတီတစ်ခုမှဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါအတွေ့အကြုံမှ အိုင်ဒီယာတစ်ခု ရရှိခဲ့ပါသည်။ ၎င်းမှာ “နိုင်ငံရေးအလုပ်က လွယ်ကူသည်၊ ပရဟိတအလုပ်က ခက်ခဲသည်”ဟူ၍ ဖြစ်ပါသည်။ မှန်ပါသည်။ မြန်မာ့နိုင်ငံရေးလောကတွင် ရေဒီယိုမှာ အင်တာဗျူးတာ ပါလျှင်၊ အစိုးရကို တိုက်ခိုက်ဝေဖန်လျှင်၊ လ္ဘက်ရည်ဆိုင် စကားဝိုင်းမှာ အာပေါင်အာရင်းသန်သန် စကားပြောနိုင်လျှင် နာမည်ကြီးသည်၊ ဆုငွေရသည်၊ ဆုတံဆိပ်ရသည်၊ ပြည်သူချစ်သည်၊ နိုင်ငံတကာချီးမြှင့်မြှောက်စားတာ ခံရသည်။ ပရဟိတကား ထိုသို့မဟုတ် အရာရာပေးဆပ်ရသည်၊ စွန့်လွတ်ရသည်၊ အနစ်နာခံရသည်၊ သည်းခံရသည်၊ သဘောထားကြီးရသည်၊ မေတ္တာစေတနာထားရသည်၊ ဆုလာဘ်များ ဆုငွေများ မဆိုထားဘိ မည်သည့်မီဒီယာမှာမျှ ပါမလာနိုင်သလို မည်သည့်အကြီးအကဲကမျှ အသိအမှတ်ပြုလိမ့်မည် မဟုတ်ပါ။ ထို့ကြောင့် မြန်မာပြည်၏ အခြေအနေက နိုင်ငံရေးသမားတွေ ကောင်းစားဖို့ အခွင့်အလမ်းများ ဖွင့်ပေးထားပြီး ပရဟိတသမားတွေ အိတ်စိုက်သာသနာပြုချင်တာတောင် လုပ်ကိုင်ဖို့ အခွင့်အလမ်း နည်းပါးခဲ့ရလေသည်။
“နိုင်ငံရေးလုပ်ရတာ လွယ်ကူတယ်၊ ပရဟိတလုပ်ရတာ မလွယ်ဘူး ” ဤအတွေးအခေါ်ကို မကြာခဏ ပို့ချမိသလို စာရေးသူကိုယ်တိုင်လည်း အခက်အခဲရှိတိုင်း ထိုစာသားကို ရေရွတ်နေမိတတ်လေသည်။
ပရဟိတပညာရေးလုပ်သည့်အခါမှ သစ်တစ်ပင်းရင်း ဝါးတစ်ပင်ရင်းမှာ အိပ်ခဲ့ရဖူးပါသည်။ ပူလောင်အိုက်စပ်သော အခန်းကျဉ်းလေးထဲမှာ အမြဲအိပ်ခဲ့ရလေသည်။ ညအခါ အအေးအဖျော် သောက်စရာမရှိ၍ ရေနွေးကြမ်းနှင့် ပြီးရသည့်အကြိမ်ပေါင်းလည်း မနည်းလှပါ။ ရံဖန်ရံခါ ရေနွေးကြမ်းပြတ်လပ်သည်မျိုးနှင့်ပင် ကြုံခဲ့ရဖူးပါသည်။ ပရဟိတအလုပ်ကား နိုင်ငံရေးလောက် မလွယ်ကူလှပါ။
ပညာရေးကျောင်းရောက်သည်နှင့် ရေပြည့်စုံ၏လော မီးပြည့်စုံ၏လော စိစစ်ရသည်။ ရေမီးပြည့်စုံလျှင် ဆွမ်းစားဆောင်ပြင်ဆင်ထားမှုများနှင့် လိုအပ်ချက်များ လုပ်ပေးစရာရှိသည်များ ရှာဖွေကြရသည်။ သန့်စင်ခန်းကား အရေးအကြီးဆုံးဖြစ်၏။ ဝေးလံလွန်းသော ပြည်နယ်များမှ တိုင်းရင်းသားကလေးငယ်များနှင့် ပြည်မကြီးမှ အခြေခံလူတန်းစားကလေးငယ်များဖြစ်သဖြင့် လူနေမှုအဆင့်အတန်းက နိမ့်ကျလှသည်။ ကောင်းမွန်ပြည့်စုံအောင် လုပ်ကိုင်ပေးထားပါလျက် ရေမသုံးစွဲတတ်ကြ၍ ညစ်ပေနေသည်များကို သန့်ရှင်းပေးရသည်။ ပိတ်ဆို့နေသည်များကို ထိုးဖောက်ပစ်ရသည်။ ဖိတ်စင်နေသည်များကို လှည်းကျင်းပစ်ရသည်။ မိတ်ကပ်သနပ်ခါးများဖြင့် အလှပြင်ထားသည့် မိန်းကလေးများဆို၍ သန့်သန့်ရှင်းရှင်းနေထိုင်တတ်သည် မထင်လိုက်ပါနှင့် သူတို့အိမ်သာသန့်ရှင်းပေးရတာ အခက်ဆုံးပင်။ ဂွမ်းကပ်လိုလို ပတ်တီးလိုလို မိန်းကလေးအသုံးအဆောင်များပင် ရှင်းလင်းသုတ်သင်ပေးခဲ့ရပါသည်။
မှတ်တမ်းတင်မခံရသော ပရဟိတလုပ်ငန်းကား ကိုယ်စောင့်နတ်မှတစ်ပါး အခြားမည်သူတစ်ဦးတစ်ယောက်မျှ အသိအမှတ်ပြုနိုင်လောက်သည့် လုပ်ငန်းမဟုတ်ပါပေ။
ဤသို့သော ပေးဆပ်ခြင်းမှာ မွေ့လျော်သော်လည်း ယခုအခါ သားသားမီးမီးများနှင့် ခွဲခွါ၍နေခဲ့ရပါသည်။ အစပထမပိုင်းတွင် တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေ၍ နောက်ဆံမတင်းနိုင်ခဲ့ပါ။ နောက်ပိုင်းတွင်မူ နေသားကျခဲ့ပြီးဖြစ်၍ ဣစ္ဆာသယ လိုတရဂါထာ ရွတ်ဖတ်ပူဇော်ရင်း ကလေးငယ်များအတွက် ဆုတောင်းပေးခဲ့ရပါသည်။ အနယ်နယ်အရပ်ရပ်မှ ညီအစ်ကိုမောင်နှမများကျေးဇူးကြောင့် ပူပင်သောကမဖြစ်ရတော့ပါ။ ရမည်းသင်း မဘသမှ ဆရာတော်ဦးစန္ဒောဦးဆောင်သော မျိုးချစ်ပြည်သူများ စုပေါင်းလှူဒါန်းကြသည်မှစ၍ ပျံ့နှံ့ကျယ်ပြန့်ကာ ရမည်းသင်း၊ ပျော်ဘွယ်၊ မိတ္ထီလာ၊ သာစည်၊ နေပြည်တော်၊ တပ်ကုန်း၊ ပျဉ်းမနား၊ လယ်ဝေး၊ ကျောက်ဆည်၊ ရန်ကုန်၊ တိုက်ကြီး၊ သာယာဝတီ၊ ကရင်၊ ကယား၊ ရှမ်းတောင်၊ မန္တလေး၊ စစ်ကိုင်း၊ ဧရာဝတီ၊ မကွေး စသည့် တိုင်းဒေသကြီး သံဃာတော်များဦးဆောင်သည့် မျိုးချစ်ပြည်သူများ ပရဟိတသမားများ ကြွရောက်လှူဒါန်းကြ၊ အားပေးစကားပြောကြ၊ ဆုံးမသြဝါဒပေးကြနှင့် မြင်ရသူသည်ပင် ဓမ္မပီတိ ကြည်နူးမိခဲ့လေသည်။
အဆိုပါအဖွဲ့များတွင် ဆန်အိတ်ရာကျော်လှူဒါန်းကြသူများလည်း ပါသည်။ ရိက္ခာများ ကားကြီးကားငယ်ဖြင့် ဆောင်ယူလှူဒါန်းကြသူများလည်း ပါသည်။ တစ်သိန်းကျပ်မှ သိန်းလေးငါးဆယ်ကျပ်အထိ ပညာရေးပဒေသာပင်စိုက်ထူလှူဒါန်းကြသူများလည်း ပါသည်။ ဝါတော်လေးငယ် ဆယ်ရ ထေရ်ကြီးဝါကြီးဆရာတော်ကြီးများလည်း ပါသည်။ ရံဖန်ရံခါ ပညာရေးအကယ်ဒမီ ဖေ့စ်ဘုတ်အကောင့်မှ တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်သဖြင့် စာရေးသူလည်း တရားနာခွင့် ရရှိခဲ့လေသည်။ မိုဘိုင်းဖုန်းဖြင့် တရားနာခြင်းဖြစ်သော်လည်း ရိုသေလေးစားစွာ လက်အုပ်ချီ၍ ကြည်ညိုနာယူမိခဲ့လေသည်။ အစားလည်း ကျွေး တရားလည်းပေးသော ဆရာတော်ကြီးများ၊ ရိက္ခာလည်းလှူ သိက္ခာလည်းထူတော်မူသော ဆရာတော်ကြီးများဖြစ်၏။ ကြည်နူးပီတိဖြင့် မျက်ရည်ဝဲမိလေတော့၏။ သြဝါဒများကလည်း မှတ်သားစရာပင်။ တိုတိုကျဉ်းကျဉ်းနှင့် လိုရင်းထိမိလှ၏။ ကလေးငယ်များ ကံကောင်းပါသည်။ သံဃာတော်များက ရှာကျွေး၊ သံဃာတော်များက ထောက်ပံ့၊ သံဃာတော်များက တရားဟော၊ သံဃာတော်များက ဆုံးမ စသည်ဖြင့် တိုင်းနှင့်ပြည်နယ်အသီးသီးမှ သံဃာတော်များအား ဖူးမြော်ရခြင်း၊ တရားနာရခြင်း၊ သြဝါဒခံယူရခြင်းဖြင့် ဘဝတစ်ခုလုံး အကျိုးရှိစေမည့် အမွေးအနှစ်များ ရရှိခဲ့ခြင်း ဖြစ်လေသည်။ အနှစ်သာရပြည့်ဝသော ဘဝကိုယ်စီ တည်ဆောက်နိုင်တော့မည်ဖြစ်၏။
ကြွရောက်ချီးမြှောက်တော်မူကြသော ထေရ်ကြီးဝါကြီးဆရာတော်ကြီးများတွင် ရေစကြိုမြို့မှ ရှင်မတောင်ဆရာတော်ဘုရားကြီး၊ နေပြည်တော်တပ်ကုန်းမှ ရှောက်ကုန်းဆရာတော်ဘုရားကြီး၊ ကယားပြည်နယ်မှ လွိုင်လင်လေးဆရာတော်ဘုရားကြီး၊ သာယာဝတီမှ …. ဆရာတော်ဘုရားကြီးတို့ ပါဝင်ပါသည်။ အလွန်တရာဝေးလံသောဒေသမှ အရောက်လာကာ အပင်ပန်းခံ အကုန်ကျခံ လှူဒါန်းထောက်ပံ့တော်မူကြသော ဆရာတော်ကြီးများ၏ ကျေးဇူးကား ကြီးမားကျယ်ပြောလှတော့၏။ ကျေးဇူးလည်း တင်၏။ ဝမ်းလည်းသာ၏။ အားလည်းရှိ၏။
အလှူအတန်းရှိတိုင်း ကြွရောက်ချီးမြှောက်တော်မူသော ဆရာတော်ကြီးကား မန္တလေး ဘုရားကြီးတိုက်မှ ပါဠိပါရဂူဆရာတော်ကြီး ဦးကုသလဖြစ်လေသည်။ ဆရာတော်ကြီးသည် စာရေးသူမရှိသည့်နောက်ပိုင်း ပညာရေးအကယ်ဒမီကို အထူးအာရုံစိုက်ကာ တပည့် ဒကာ ဒကာမများကို ဦးဆောင်လျက် မုန့်ဟင်းခါးကျွေးလိုက် ဒန်ပေါက်ကျွေးလိုက် မုန့်ဖိုးပေးလိုက် မုန့်ဝေလိုက်ဖြင့် အမြဲချီးမြှောက်တော်မူလေသည်။ အလှူရှင်အဖွဲ့များ ရောက်လာလျှင်လည်း ဒိုင်ခံ ဧည့်ခံတော်မူလေသည်။ စာရေးသူ၏ အဖိုးတမျှ သံယောဇဉ်ကြီးမားလှသော ဆရာတော်ဘုရားကြီးပင်တည်း။
စာရေးသူဦးဆောင်သည့် ပညာဒါနလုပ်ငန်းကြီးသုံးခုတွင် ကျောက်ချောရွာ ပညာဒါနကျူရှင်ကျောင်းအတွက် ပူပင်ကြောင့်ကြမှု မကြီးမားလှပါ။ မန်းမဟော်သဓာရံပုံငွေများမှ သုံးစွဲသောကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။ လောကအလင်းပညာဒါနကျူရှင်ကျောင်းအတွက်လည်း စိတ်အေးရသလောက် ရှိပါပြီ။ ရောဟိနီသံဃဝေယျာဝစ္စအဖွဲ့နှင့် ဝီရသူဖောင်ဒေးရှင်းကို ဦးဆောင်တည်ထောင်ခဲ့သော အမရပူရမြို့နေ MKကျောက်မျက်ရတနာလုပ်ငန်းပိုင်ရှင် ဦးမိုးကို+ဒေါ်ခိုင်မာဝင်း မိသားစုက တာဝန်ယူ ထောက်လှူနေသောကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။ မင်းကွန်းပုထိုးတော်ကြီး ပညာရေးအကယ်ဒမီအတွက်ကား ယနေ့ထက်ထိ ရင်လေးနေဆဲပင်။ လက်ရှိအချိန်တွင် ပညာရေးပဒေသာပင်ငွေ သိန်းပေါင်း နှစ်ရာ့ငါးဆယ်ကျော် ရှိပါသည်။ စာရေးသူ၏ အခက်အခဲကို သိရှိကြသော မန်းမြို့ဈေး ရွှေမန်းမေအထည်ဆိုင်ပိုင်ရှင် ဦးဝင်းမြင့်ဌေး+ဒေါ်ခင်မမ မိသားစုက ကထိန်လာခင်းစဉ် ပညာရေးပဒေသာပင်အဖြစ် သိန်းနှစ်ဆယ် စိုက်ထူလှူဒါန်းခဲ့ရာမှ အလှူရှင်အသီးသီး ပေါ်ပေါက်လာခြင်းကြောင့် သိန်းနှစ်ရာ့ငါးဆယ် ပြည့်သွားခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ၎င်းငွေသည် ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ပညာသင်နှစ်အတွက် ဝန်ထမ်းလစာပင် မလုံလောက်သေးပါ။ အခြေခံစားသောက်ကုန်ဖြစ်သည့် ဆန် ဆီ ငါးပိ ငါးခြောက် ငံပြာရည် ကြက်သွန် ပဲ တို့ကို သီးနှံပေါ်ချိန်တွင် ဆရာတော်သံဃာတော်များဦးဆောင်ထောက်ပံ့နေသောကြောင့် ရိက္ခာအတွက် စိတ်အေးနိုင်ပါသည်။
ပညာရေးအကယ်ဒမီကျောင်းသားကျောင်းသူများတွင် အမိမဲ့သွားသူများ၊ အဖမဲ့သွားသူများ၊ မိဘနှစ်ပါးလုံး မဲ့သွားသူများ၊ မိဘနှစ်ပါးလုံး ရှိသေးသော်လည်း ကျောင်းမထားနိုင် ပညာရေးကို ဦးစားမပေးနိုင်သူများက အများစုဖြစ်ကာ ကျောင်းထားနိုင် ထောက်ပံ့နိုင်သည့် မိဘများရှိသည့် ကလေးငယ်မျိုးမှာ အနည်းငယ်သာ ရှိပါသည်။ ၎င်းတို့သည် လိမ္မာရေးခြားရှိစေလိုသော မိဘများ စည်းကမ်းသေဝပ်လိုသော မိဘများက ဂရုစိုက်အပ်နှံထားသူများ ဖြစ်ပါသည်။ ချင်း၊ ကချင်၊ ရှင်း၊ ပအိုဝ်၊ ပလောင်၊ ဓနု တိုင်းရင်းသားများ စုံလင်ပြီး ရခိုင်နှင့် ကရင်မှာ တစ်ဦးစ နှစ်ဦးစသာ ရှိပါသည်။ ကယား၊ မွန်တို့ မရှိသေးသဖြင့် တိုင်းရင်းသားအားလုံး မစုံသေးဟု ဆိုရပါမည်။
ကျောက်ရိုင်းတုံးလေးများကို ထိန်းကျောင်းပြုပြင် သွန်သင်ဆုံးမ၍ လိမ္မာယဉ်ကျေး အဖိုးတန်ကလေးများဖြစ်အောင် နိစ္စဓူဝ ကြည့်ရှုစောင့်ရှောက်မှုကား အင်မတန်တာဝန်ကြီးလေးပါသည်။ ပညာရေးတစ်ခုတည်းအတွက်ပင် အချိန်ပေးဖို့ မလုံလောက်ပါ။ အမြဲနေ ဆရာဆရာမများ ရှားပါးခြင်း၊ လိုအပ်လျှင် လိုအပ်သလို အဆင့်မြင့်ဆရာ ဆရာမများ ဖိတ်ခေါ်၍ အချိန်ပိုသင်ပေးရခြင်း၊ ဂိုက်ဆရာ ဆရာမများ ရှာဖွေရခြင်းနှင့်ပင် စိတ်ပန်းလူပန်း ဖြစ်ခဲ့ရပါသည်။
ပညာရေးအကယ်ဒမီ၏ ထူးခြားချက်တစ်ခုမှာ ရှစ်တန်း ကိုးတန်းများအား အင်္ဂလိပ်စကားပြော (English Speaking) သင်တန်း ဘာသာရပ်တစ်ခုအဖြစ် သီးသန့်ဖွင့်လှစ်သင်ကြားပေးနေခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
ပညာရေးအကယ်ဒမီဆောင်ပုဒ်မှာ “သာသနာ ပညာ ယဉ်ကျေးမှု၊ ကောင်း တော် ယဉ်အောင်ပြု” ဖြစ်ပါသည်။ လူကောင်း လူတော် လူယဉ်ကျေးလေးတွေ ထွန်းကားစေရေး အဓိက ဖြစ်ပါသည်။
ကောင်း တော် ယဉ် – အဖိုးတန်ကလေးငယ်များ ထွန်းကားရေးအတွက် အဘက်ဘက်မှ ပံ့ပိုးကူညီ လှူဒါန်းထောက်ပံ့ ပြုစုပျိုးထောင် ထိန်းကျောင်းပြုပြင်ပေးတော်မူကြသော မျိုးချစ်သံဃာတော်များနှင့် မျိုးချစ်ပြည်သူများအားလုံးကို အထူးတလည် ကျေးဇူးတင်ဂုဏ်ပြုအပ်ပေသည်။ ။
စာရေးသူမှာ ပညာဒါနစာသငျကြောငျး သုံးကြောငျးရှိပါသညျ။ လောကအလငျး၊ မနျးမဟျောသဓာနှငျ့ ပညာရေးအကယျဒမီတို့ ဖွဈပါသညျ။ လောကအလငျးပညာဒါနကြူရှငျကြောငျးကို ၂၀၁၂ ခုနှဈက တညျထောငျခဲ့ပွီး မန်တလေး၊ ခမျြးမွသာစညျမွို့နယျ၊ မွရညျနန်ဒာရပျကှကျမှာ တညျရှိပါသညျ။ တက်ကသိုလျဝငျတနျးသီးသနျ့ ကြူရှငျကြောငျးဖွဈပါသညျ။ ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ပညာသငျနှဈမှ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသငျနှဈအထိ အောငျမွငျသူပေါငျး ၁၂၄ဦး ရှိခဲ့ပါသညျ။ ယခု ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ပညာသငျနှဈမှာလညျး ဝငျရောကျဖွဆေိုနကွေပါသညျ။
ဒုတိယကြောငျးဖွဈသော မနျးမဟျောသဓာမှာ ပုသိမျကွီးမွို့နယျ၊ ကြောကျခြောကြေးရှာမှာ တညျရှိပါသညျ။ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ပညာသငျနှဈမှာ စတငျဖှငျ့လှဈကာ ၉တနျး ၁၀တနျး ကြောငျးသူကြောငျးသားမြား လကျခံထားပါသညျ။ မနျးမဟျောသဓာ အမြိုးသားရေးကိုယျပိုငျအထကျတနျးကြောငျးတျောကွီး အကောငျအထညျမပျေါသေးခငျ ကြေးရှာလိုအပျခကျြအရ ဖှငျ့လှဈပေးခဲ့ခွငျး ဖွဈပါသညျ။ နာမညျအပွညျ့အစုံမှာ “ကြောကျခြောရှာ ပညာဒါနကြူရှငျကြောငျး” ဖွဈပါသညျ။ စတငျတညျထောငျခါစဖွဈ၍ အောငျခကျြမကောငျးသေးပါ။
တတိယကြောငျးဖွဈသော ပညာရေးအကယျဒမီကား စဈကိုငျးမွို့နယျ၊ မငျးကှနျးတောငျရိုး၊ ပုထိုးတျောကွီးအနီးမှာ တညျရှိပါသညျ။ ပဉ်စမတနျးမှ ဒသမတနျးအထိ အလယျတနျး အထကျတနျး ကြောငျးသူကြောငျးသားမြား လကျခံထားပါသညျ။ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသငျနှဈမှာ ဆယျတနျး ၁၂ဦး အောငျမွငျပါသညျ။ နာမညျအပွညျ့အစုံမှာ “မငျးကှနျးပုထိုးတျောကွီး ပညာရေးအကယျဒမီ” ဖွဈပါသညျ။ ရညျရှယျခကျြမှာ မူလတနျး အလယျတနျး အောငျမွငျပွီး ဆကျလကျကြောငျးမနနေိုငျသော ရှာသူရှာသား နှမျးပါးကလေးငယျမြားလညျး သူဌေးသားသမီးမြားနှငျ့တနျးတူ အဆငျ့အတနျးမွငျ့မွငျ့ ပညာသငျယူနိုငျရေးပငျ ဖွဈပါသညျ။ သို့ဖွဈ၍ ကြောငျးအိပျကြောငျးစား ဆရာ ဆရာမမြား ကြောငျးသူကြောငျးသားမြားအား နစေ့ဉျ ထမငျးသုံးနပျ ကြှေးမှေးရကာ ပညာရေး ကနျြးမာရေး စားရေး နရေေး အလုံးစုံတာဝနျယူရပါသညျ။ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသငျနှဈမှာ စတငျဖှငျ့လှဈခဲ့ပွီး ဦးရေ တဈရာ့ခွောကျဆယျကြျော ရှိပါသညျ။ ယခုနှဈ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ပညာသငျနှဈတှငျ ဦးရေ သုံးရာကြျောရှိရာ ဆယျတနျးကြောငျးသားကြောငျးသူပေါငျး တဈရာ့ခုနဈဆယျကြျော ရှိပါသညျ။ နစေ့ဉျ ထမငျးသုံးနပျအတှကျ ဆနျလေးပိုငျး ကုနျကပြွီး ဝနျထမျးလစာ၊ ရိက်ခာ၊ ပညာရေး၊ ကနျြးမာရေးအတှကျ လစဉျ သိနျး ခုနဈဆယျကြျောမှ ကိုးဆယျကြျောအထိ ကုနျကပြါသညျ။
အမာခံလှူဒါနျးမညျ့ ဒါယကာ ဒါယိကာမမြား မရှိခွငျး၊ ငှပေဒသောပငျစိုကျထူ ဘဏျအပျထားမှုမရှိခွငျးတို့ကွောငျ့ စာရေးသူ၏ တပညျ့ဒကာ ဒကာမမြားက ပညာရေးအကယျဒမီကြောငျးတျောကွီးအတှကျ စိုးရိမျပူပနျခဲ့ကွပါသညျ။ စာရေးသူကလညျး သူ့နညျးသူ့ဟနျဖွငျ့ သူ့ဘာသာဖွဈမွောကျသှားလိမျ့မညျဟု ယုံကွညျထားသညျ့အားလြျောစှာ စာရေးသူ တရားပှဲပွနျပှငျ့စအခါနှငျ့ ကွုံကွိုကျ၍ တရားပှဲမြားစိပျကာ ဓမ်မပူဇာမြား ရရှိလာသဖွငျ့ ပထမခွလှေမျး အောငျမွငျနိုငျခဲ့ပါသညျ။ ဒကာ ဒကာမအငျအား မတောငျ့တငျးဘဲ ပရဟိတဘကကြောငျးကွီးကို တာဝနျယူဖှငျ့လှဈထားခွငျးသညျ စာသငျတိုကျတဈတိုကျ ဖှငျ့လှဈရခွငျးထကျ တာဝနျကွီးလှပါသညျ။ စာရေးသူမှာ စာခပြွီးတိုငျး မငျးကှနျးသို့ သှားရပါသညျ။ ရိက်ခာအတှကျလညျး ကိုယျတိုငျစီမံကာ အမွဲပို့ပေးရပါသညျ။ သငျရိုးစာအုပျမြား၊ အထူးထုတျစာအုပျမြား၊ ဆရာကိုငျစာအုပျမြား အမွဲဝယျယူပို့ပေးနရေပါသညျ။
ကလေးမြားကို နစေ့ဉျပွုစုပြိုးထောငျရသဖွငျ့ ကိုယျ့သားသမီးအလား သံယောဇဉျထားခဲ့ရပါသညျ။ တရားဟောကွှသညျ့အခါတိုငျး ‘ကြုပျက အရငျလို လူပြိုလူလှတျမဟုတျတော့ဘူးဗြ၊ သားသားမီးမီးတှေ ရနပွေီ’ဟု ဒကာ ဒကာမမြားကို ပွောပွတတျသလို စားအိုးကွီးသညျ့ မိသားစုမြား ငွီးငွူသညျနှငျ့ ကွုံရလြှငျလညျး ‘ခငျဗြားတို့ စားအိုးကွီးတာ ဘာဟုတျသေးလို့လဲ၊ ကြုပျစားအိုးက လူသုံးရာကြျောကွီးတောငျ’ဟု မျောကွှားတတျပါသညျ။
၂၀၁၉-၂၀၂၀ ပညာသငျနှဈ နှဈစကာလပငျ ရှိပါသေးသညျ။ တဈနညျးအားဖွငျ့ ကြောငျးဖှငျ့ပွီး၍ နှဈလသာရှိပါသေးသညျ။ သားသားမီးမီးမြားနှငျ့ ဝေးရာသို့ ရောကျရှိခဲ့ရပါသညျ။ ပဒသောပငျလညျး မရှိ၊ အမာခံ ဒကာ ဒကာမလညျး မရှိ၊ ဓမ်မပူဇာမြားလညျး မရှိတော့သဖွငျ့ ကြောငျးတျောကွီး ပိတျရတော့မညျ့အဖွဈဆိုးနှငျ့ ကွုံခဲ့ရပါသညျ။ စိုးရိမျမှုလှနျကဲသော မိဘမြားက ပွနျချေါသှား၍ ကြောငျးသား ဆယျ့လေးငါးဦး ရှာပွနျသှားကွပါသညျ။ စာရေးသူကလညျး အားလုံးတာဝနျယူကွောငျးနှငျ့ အာမခံကွောငျး ပွောပွထားပွီး အားလုံးပွညျ့စုံအောငျ စီမံပေးနိုငျခဲ့ပါသညျ။ ပရဟိတအဖှဲ့အစညျးမြား၊ အမြိုးသားရေးအငျအားစုမြား၊ မဘသညီနောငျမိသားစုမြား၏ ကွညျ့ရှုစောငျ့ရှောကျမှုကွောငျ့ လှယျကူခြောမောစှာပငျ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ပညာသငျနှဈကို ဖွတျသနျးနိုငျခဲ့ပါသညျ။ ယခုဆိုလြှငျ ဆယျတနျးစာမေးပှဲမြားပငျ ဖွဆေိုနကွေပပွေီတညျး။
နိုငျငံရေးနှငျ့ ပရဟိတ မညျသညျ့အရာက ခံခဲသနညျး ဤမေးခှနျးကို အတှအေ့ကွုံက အဖွပေေးနိုငျခဲ့ပသေညျ။ စာရေးသူသညျ ၂၀၁၃ ခုနှဈမှစ၍ နဂါးနီစုဘူးမြားကို တညျထောငျခဲ့ပါသညျ။ ဆငျးရဲနှမျးပါးပွညျသူမြား အထူးသဖွငျ့ အိုးပိုငျအိမျပိုငျမရှိသေးသညျ့ ကြူးကြျောအိမျနပွေညျသူမြားအား ငှကွေေးအရငျးအနှီးထုတျပေးပွီး ငှစေုခိုငျးသညျ့စနဈ ဖွဈပါသညျ။ ပွညျသူအမြားစုက သစ်စာရှိကွ၊ အလုပျကွိုးစားကွသျောလညျး ရပျကှကျနေ ပရဟိတအားသနျသူမြား၏ အကူအညီမရ၍ စုဘူးမြား တိုးခြဲ့နိုငျခွငျး မရှိခဲ့ပါ။ ရပျကှကျအီးစီဟုချေါဆိုအပျသော နဂါးနီစုဘူးအဖှဲ့ အကွီးအကဲမြား၏ တာဝနျကလညျး မလှယျကူလှပါ။ နစေ့ဉျနတေို့ငျး ငှကေောကျခံရသညျ။ စာရငျးပွုစုရသညျ။ တဈပတျတဈခါ မစိုးရိမျသို့ လာရောကျငှအေပျနှံရသညျ။ ကိုယျ့ထမငျးကိုယျစား ကိုယျ့စကျဆီကိုယျဝယျထညျ့ရသညျ။ သညျကွားထဲ အသငျးဝငျမြား အလိုမကြ၍ ရနျတှကွေ့သညျနှငျ့လညျး ကွုံရ၏။ အခြို့ ငှမေစုနိုငျသညျ့အိမျမြားသို့ ကိုယျတိုငျသှား၍လညျး အကွှေးတောငျးရ၏။ ဤကဲ့သို့ ပွညျသူလူထုအပျေါ စတေနာထား၍ အနဈနာခံကွသျောလညျး မညျသညျ့သတငျးဌာနကမှ မရေးသားကွ၊ မညျသညျ့ရုပျသံမီဒီယာကမှ ရိုကျကူးထုတျလှငျ့ပေးခွငျးမြိုးလညျး မရှိ၊ ဆုတံဆိပျတှရေဖို့၊ စပှနျဆာတှပေျေါဖို့၊ ဒိုနာတှေ လာဖို့ဆိုသညျမှာ ဝလောမှဝေးပငျ။ ခြီးမွှငျ့မွှောကျစား သူကောငျးအပွုခံရဖိုိ့ဆိုသညျမှာ ပို၍ပငျဝေးပသေေးသညျ။ ထို့ကွောငျ့လညျး ရပျကှကျအီးစီမြား တဈဖှဲ့ပွီးတဈဖှဲ့ နုတျထှကျသှားကာ ယခုဆိုလြှငျ နဂါးနီစုဘူး သုံးလေးဘူးမြှသာ ကနျြပတေော့သညျ။
၂၀၁၃ ခုနှဈ ရနျကုနျမွို့တှငျးတဈနရော ဆငျးရဲသူဆငျးရဲသားပေါမြားသညျ့ မွို့နယျတဈခုတှငျ တရားဟောရပါသညျ။ ဓမ်မပူဇာအလှူငှေ မြားမြားစားစားမဟုတျလှပါ။ ငှစေက်ကူအရှကျကွီးဆို၍ ငါးရာတနျ တဈထောငျကပျြတနျမြားသာ အနညျးငယျပါသညျကို တှရေ့ပါသညျ။ အမြားစုမှာ အရှကျသေးမြား ဖွဈပါသညျ။ ငှစေက်ကူအနှမျးလေးမြားကိုကွညျ့၍ စိတျမကောငျးဖွဈမိပါသညျ။ ဤသို့ဖွငျ့ ၎င်းငျးရပျကှကျနပွေညျသူမြားအတှကျ တဈခုခုလုပျပေးရလြှငျ ကောငျးမညျဆိုသညျ့အတှေးနှငျ့အတူ နဂါးနီစုဘူးအသငျးတညျထောငျပေးဖို့ စိတျကူးပျေါခဲ့ပါသညျ။ တရားပှဲပငျ့သူမြားကိုချေါ၍ ၎င်းငျးအစီအစဉျကိုပွောပွရာ စညျးဝေးတိုငျပငျဦးမညျဟုဆိုကာ ယနအေ့ထိ ပျေါမလာကွတော့ပါ။ စာရေးသူက ဖုနျးဆကျမေးသညျ့အခါတိုငျးလညျး ရှောငျလှဲဖွသှေားကွသညျနှငျ့သာ ကွုံရပါသညျ။ အဆိုပါတရားပှဲပငျ့သူမြားသညျ ပါတီတဈခုမှဖွဈပါသညျ။ အဆိုပါအတှအေ့ကွုံမှ အိုငျဒီယာတဈခု ရရှိခဲ့ပါသညျ။ ၎င်းငျးမှာ “နိုငျငံရေးအလုပျက လှယျကူသညျ၊ ပရဟိတအလုပျက ခကျခဲသညျ”ဟူ၍ ဖွဈပါသညျ။ မှနျပါသညျ။ မွနျမာ့နိုငျငံရေးလောကတှငျ ရဒေီယိုမှာ အငျတာဗြူးတာ ပါလြှငျ၊ အစိုးရကို တိုကျခိုကျဝဖေနျလြှငျ၊ လ်ဘကျရညျဆိုငျ စကားဝိုငျးမှာ အာပေါငျအာရငျးသနျသနျ စကားပွောနိုငျလြှငျ နာမညျကွီးသညျ၊ ဆုငှရေသညျ၊ ဆုတံဆိပျရသညျ၊ ပွညျသူခဈြသညျ၊ နိုငျငံတကာခြီးမွှငျ့မွှောကျစားတာ ခံရသညျ။ ပရဟိတကား ထိုသို့မဟုတျ အရာရာပေးဆပျရသညျ၊ စှနျ့လှတျရသညျ၊ အနဈနာခံရသညျ၊ သညျးခံရသညျ၊ သဘောထားကွီးရသညျ၊ မတ်ေတာစတေနာထားရသညျ၊ ဆုလာဘျမြား ဆုငှမြေား မဆိုထားဘိ မညျသညျ့မီဒီယာမှာမြှ ပါမလာနိုငျသလို မညျသညျ့အကွီးအကဲကမြှ အသိအမှတျပွုလိမျ့မညျ မဟုတျပါ။ ထို့ကွောငျ့ မွနျမာပွညျ၏ အခွအေနကေ နိုငျငံရေးသမားတှေ ကောငျးစားဖို့ အခှငျ့အလမျးမြား ဖှငျ့ပေးထားပွီး ပရဟိတသမားတှေ အိတျစိုကျသာသနာပွုခငျြတာတောငျ လုပျကိုငျဖို့ အခှငျ့အလမျး နညျးပါးခဲ့ရလသေညျ။
“နိုငျငံရေးလုပျရတာ လှယျကူတယျ၊ ပရဟိတလုပျရတာ မလှယျဘူး ” ဤအတှေးအချေါကို မကွာခဏ ပို့ခမြိသလို စာရေးသူကိုယျတိုငျလညျး အခကျအခဲရှိတိုငျး ထိုစာသားကို ရရှေတျနမေိတတျလသေညျ။
ပရဟိတပညာရေးလုပျသညျ့အခါမှ သဈတဈပငျးရငျး ဝါးတဈပငျရငျးမှာ အိပျခဲ့ရဖူးပါသညျ။ ပူလောငျအိုကျစပျသော အခနျးကဉျြးလေးထဲမှာ အမွဲအိပျခဲ့ရလသေညျ။ ညအခါ အအေးအဖြျော သောကျစရာမရှိ၍ ရနှေေးကွမျးနှငျ့ ပွီးရသညျ့အကွိမျပေါငျးလညျး မနညျးလှပါ။ ရံဖနျရံခါ ရနှေေးကွမျးပွတျလပျသညျမြိုးနှငျ့ပငျ ကွုံခဲ့ရဖူးပါသညျ။ ပရဟိတအလုပျကား နိုငျငံရေးလောကျ မလှယျကူလှပါ။
ပညာရေးကြောငျးရောကျသညျနှငျ့ ရပွေညျ့စုံ၏လော မီးပွညျ့စုံ၏လော စိစဈရသညျ။ ရမေီးပွညျ့စုံလြှငျ ဆှမျးစားဆောငျပွငျဆငျထားမှုမြားနှငျ့ လိုအပျခကျြမြား လုပျပေးစရာရှိသညျမြား ရှာဖှကွေရသညျ။ သနျ့စငျခနျးကား အရေးအကွီးဆုံးဖွဈ၏။ ဝေးလံလှနျးသော ပွညျနယျမြားမှ တိုငျးရငျးသားကလေးငယျမြားနှငျ့ ပွညျမကွီးမှ အခွခေံလူတနျးစားကလေးငယျမြားဖွဈသဖွငျ့ လူနမှေုအဆငျ့အတနျးက နိမျ့ကလြှသညျ။ ကောငျးမှနျပွညျ့စုံအောငျ လုပျကိုငျပေးထားပါလကျြ ရမေသုံးစှဲတတျကွ၍ ညဈပနေသေညျမြားကို သနျ့ရှငျးပေးရသညျ။ ပိတျဆို့နသေညျမြားကို ထိုးဖောကျပဈရသညျ။ ဖိတျစငျနသေညျမြားကို လှညျးကငျြးပဈရသညျ။ မိတျကပျသနပျခါးမြားဖွငျ့ အလှပွငျထားသညျ့ မိနျးကလေးမြားဆို၍ သနျ့သနျ့ရှငျးရှငျးနထေိုငျတတျသညျ မထငျလိုကျပါနှငျ့ သူတို့အိမျသာသနျ့ရှငျးပေးရတာ အခကျဆုံးပငျ။ ဂှမျးကပျလိုလို ပတျတီးလိုလို မိနျးကလေးအသုံးအဆောငျမြားပငျ ရှငျးလငျးသုတျသငျပေးခဲ့ရပါသညျ။
မှတျတမျးတငျမခံရသော ပရဟိတလုပျငနျးကား ကိုယျစောငျ့နတျမှတဈပါး အခွားမညျသူတဈဦးတဈယောကျမြှ အသိအမှတျပွုနိုငျလောကျသညျ့ လုပျငနျးမဟုတျပါပေ။
ဤသို့သော ပေးဆပျခွငျးမှာ မှလြေ့ျောသျောလညျး ယခုအခါ သားသားမီးမီးမြားနှငျ့ ခှဲခှါ၍နခေဲ့ရပါသညျ။ အစပထမပိုငျးတှငျ တိုကျပှဲပွငျးထနျနေ၍ နောကျဆံမတငျးနိုငျခဲ့ပါ။ နောကျပိုငျးတှငျမူ နသေားကခြဲ့ပွီးဖွဈ၍ ဣစ်ဆာသယ လိုတရဂါထာ ရှတျဖတျပူဇျောရငျး ကလေးငယျမြားအတှကျ ဆုတောငျးပေးခဲ့ရပါသညျ။ အနယျနယျအရပျရပျမှ ညီအဈကိုမောငျနှမမြားကြေးဇူးကွောငျ့ ပူပငျသောကမဖွဈရတော့ပါ။ ရမညျးသငျး မဘသမှ ဆရာတျောဦးစန်ဒောဦးဆောငျသော မြိုးခဈြပွညျသူမြား စုပေါငျးလှူဒါနျးကွသညျမှစ၍ ပြံ့နှံ့ကယျြပွနျ့ကာ ရမညျးသငျး၊ ပြျောဘှယျ၊ မိတ်ထီလာ၊ သာစညျ၊ နပွေညျတျော၊ တပျကုနျး၊ ပဉျြးမနား၊ လယျဝေး၊ ကြောကျဆညျ၊ ရနျကုနျ၊ တိုကျကွီး၊ သာယာဝတီ၊ ကရငျ၊ ကယား၊ ရှမျးတောငျ၊ မန်တလေး၊ စဈကိုငျး၊ ဧရာဝတီ၊ မကှေး စသညျ့ တိုငျးဒသေကွီး သံဃာတျောမြားဦးဆောငျသညျ့ မြိုးခဈြပွညျသူမြား ပရဟိတသမားမြား ကွှရောကျလှူဒါနျးကွ၊ အားပေးစကားပွောကွ၊ ဆုံးမသွဝါဒပေးကွနှငျ့ မွငျရသူသညျပငျ ဓမ်မပီတိ ကွညျနူးမိခဲ့လသေညျ။
အဆိုပါအဖှဲ့မြားတှငျ ဆနျအိတျရာကြျောလှူဒါနျးကွသူမြားလညျး ပါသညျ။ ရိက်ခာမြား ကားကွီးကားငယျဖွငျ့ ဆောငျယူလှူဒါနျးကွသူမြားလညျး ပါသညျ။ တဈသိနျးကပျြမှ သိနျးလေးငါးဆယျကပျြအထိ ပညာရေးပဒသောပငျစိုကျထူလှူဒါနျးကွသူမြားလညျး ပါသညျ။ ဝါတျောလေးငယျ ဆယျရ ထရျေကွီးဝါကွီးဆရာတျောကွီးမြားလညျး ပါသညျ။ ရံဖနျရံခါ ပညာရေးအကယျဒမီ ဖစျေ့ဘုတျအကောငျ့မှ တိုကျရိုကျထုတျလှငျ့သဖွငျ့ စာရေးသူလညျး တရားနာခှငျ့ ရရှိခဲ့လသေညျ။ မိုဘိုငျးဖုနျးဖွငျ့ တရားနာခွငျးဖွဈသျောလညျး ရိုသလေေးစားစှာ လကျအုပျခြီ၍ ကွညျညိုနာယူမိခဲ့လသေညျ။ အစားလညျး ကြှေး တရားလညျးပေးသော ဆရာတျောကွီးမြား၊ ရိက်ခာလညျးလှူ သိက်ခာလညျးထူတျောမူသော ဆရာတျောကွီးမြားဖွဈ၏။ ကွညျနူးပီတိဖွငျ့ မကျြရညျဝဲမိလတေော့၏။ သွဝါဒမြားကလညျး မှတျသားစရာပငျ။ တိုတိုကဉျြးကဉျြးနှငျ့ လိုရငျးထိမိလှ၏။ ကလေးငယျမြား ကံကောငျးပါသညျ။ သံဃာတျောမြားက ရှာကြှေး၊ သံဃာတျောမြားက ထောကျပံ့၊ သံဃာတျောမြားက တရားဟော၊ သံဃာတျောမြားက ဆုံးမ စသညျဖွငျ့ တိုငျးနှငျ့ပွညျနယျအသီးသီးမှ သံဃာတျောမြားအား ဖူးမွျောရခွငျး၊ တရားနာရခွငျး၊ သွဝါဒခံယူရခွငျးဖွငျ့ ဘဝတဈခုလုံး အကြိုးရှိစမေညျ့ အမှေးအနှဈမြား ရရှိခဲ့ခွငျး ဖွဈလသေညျ။ အနှဈသာရပွညျ့ဝသော ဘဝကိုယျစီ တညျဆောကျနိုငျတော့မညျဖွဈ၏။
ကွှရောကျခြီးမွှောကျတျောမူကွသော ထရျေကွီးဝါကွီးဆရာတျောကွီးမြားတှငျ ရစေကွိုမွို့မှ ရှငျမတောငျဆရာတျောဘုရားကွီး၊ နပွေညျတျောတပျကုနျးမှ ရှောကျကုနျးဆရာတျောဘုရားကွီး၊ ကယားပွညျနယျမှ လှိုငျလငျလေးဆရာတျောဘုရားကွီး၊ သာယာဝတီမှ …. ဆရာတျောဘုရားကွီးတို့ ပါဝငျပါသညျ။ အလှနျတရာဝေးလံသောဒသေမှ အရောကျလာကာ အပငျပနျးခံ အကုနျကခြံ လှူဒါနျးထောကျပံ့တျောမူကွသော ဆရာတျောကွီးမြား၏ ကြေးဇူးကား ကွီးမားကယျြပွောလှတော့၏။ ကြေးဇူးလညျး တငျ၏။ ဝမျးလညျးသာ၏။ အားလညျးရှိ၏။
အလှူအတနျးရှိတိုငျး ကွှရောကျခြီးမွှောကျတျောမူသော ဆရာတျောကွီးကား မန်တလေး ဘုရားကွီးတိုကျမှ ပါဠိပါရဂူဆရာတျောကွီး ဦးကုသလဖွဈလသေညျ။ ဆရာတျောကွီးသညျ စာရေးသူမရှိသညျ့နောကျပိုငျး ပညာရေးအကယျဒမီကို အထူးအာရုံစိုကျကာ တပညျ့ ဒကာ ဒကာမမြားကို ဦးဆောငျလကျြ မုနျ့ဟငျးခါးကြှေးလိုကျ ဒနျပေါကျကြှေးလိုကျ မုနျ့ဖိုးပေးလိုကျ မုနျ့ဝလေိုကျဖွငျ့ အမွဲခြီးမွှောကျတျောမူလသေညျ။ အလှူရှငျအဖှဲ့မြား ရောကျလာလြှငျလညျး ဒိုငျခံ ဧညျ့ခံတျောမူလသေညျ။ စာရေးသူ၏ အဖိုးတမြှ သံယောဇဉျကွီးမားလှသော ဆရာတျောဘုရားကွီးပငျတညျး။
စာရေးသူဦးဆောငျသညျ့ ပညာဒါနလုပျငနျးကွီးသုံးခုတှငျ ကြောကျခြောရှာ ပညာဒါနကြူရှငျကြောငျးအတှကျ ပူပငျကွောငျ့ကွမှု မကွီးမားလှပါ။ မနျးမဟျောသဓာရံပုံငှမြေားမှ သုံးစှဲသောကွောငျ့ ဖွဈပါသညျ။ လောကအလငျးပညာဒါနကြူရှငျကြောငျးအတှကျလညျး စိတျအေးရသလောကျ ရှိပါပွီ။ ရောဟိနီသံဃဝယြောဝစ်စအဖှဲ့နှငျ့ ဝီရသူဖောငျဒေးရှငျးကို ဦးဆောငျတညျထောငျခဲ့သော အမရပူရမွို့နေ MKကြောကျမကျြရတနာလုပျငနျးပိုငျရှငျ ဦးမိုးကို+ဒျေါခိုငျမာဝငျး မိသားစုက တာဝနျယူ ထောကျလှူနသေောကွောငျ့ ဖွဈပါသညျ။ မငျးကှနျးပုထိုးတျောကွီး ပညာရေးအကယျဒမီအတှကျကား ယနထေ့ကျထိ ရငျလေးနဆေဲပငျ။ လကျရှိအခြိနျတှငျ ပညာရေးပဒသောပငျငှေ သိနျးပေါငျး နှဈရာ့ငါးဆယျကြျော ရှိပါသညျ။ စာရေးသူ၏ အခကျအခဲကို သိရှိကွသော မနျးမွို့ဈေး ရှမေနျးမအေထညျဆိုငျပိုငျရှငျ ဦးဝငျးမွငျ့ဌေး+ဒျေါခငျမမ မိသားစုက ကထိနျလာခငျးစဉျ ပညာရေးပဒသောပငျအဖွဈ သိနျးနှဈဆယျ စိုကျထူလှူဒါနျးခဲ့ရာမှ အလှူရှငျအသီးသီး ပျေါပေါကျလာခွငျးကွောငျ့ သိနျးနှဈရာ့ငါးဆယျ ပွညျ့သှားခွငျး ဖွဈပါသညျ။ ၎င်းငျးငှသေညျ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ပညာသငျနှဈအတှကျ ဝနျထမျးလစာပငျ မလုံလောကျသေးပါ။ အခွခေံစားသောကျကုနျဖွဈသညျ့ ဆနျ ဆီ ငါးပိ ငါးခွောကျ ငံပွာရညျ ကွကျသှနျ ပဲ တို့ကို သီးနှံပျေါခြိနျတှငျ ဆရာတျောသံဃာတျောမြားဦးဆောငျထောကျပံ့နသေောကွောငျ့ ရိက်ခာအတှကျ စိတျအေးနိုငျပါသညျ။
ပညာရေးအကယျဒမီကြောငျးသားကြောငျးသူမြားတှငျ အမိမဲ့သှားသူမြား၊ အဖမဲ့သှားသူမြား၊ မိဘနှဈပါးလုံး မဲ့သှားသူမြား၊ မိဘနှဈပါးလုံး ရှိသေးသျောလညျး ကြောငျးမထားနိုငျ ပညာရေးကို ဦးစားမပေးနိုငျသူမြားက အမြားစုဖွဈကာ ကြောငျးထားနိုငျ ထောကျပံ့နိုငျသညျ့ မိဘမြားရှိသညျ့ ကလေးငယျမြိုးမှာ အနညျးငယျသာ ရှိပါသညျ။ ၎င်းငျးတို့သညျ လိမ်မာရေးခွားရှိစလေိုသော မိဘမြား စညျးကမျးသဝေပျလိုသော မိဘမြားက ဂရုစိုကျအပျနှံထားသူမြား ဖွဈပါသညျ။ ခငျြး၊ ကခငျြ၊ ရှငျး၊ ပအိုဝျ၊ ပလောငျ၊ ဓနု တိုငျးရငျးသားမြား စုံလငျပွီး ရခိုငျနှငျ့ ကရငျမှာ တဈဦးစ နှဈဦးစသာ ရှိပါသညျ။ ကယား၊ မှနျတို့ မရှိသေးသဖွငျ့ တိုငျးရငျးသားအားလုံး မစုံသေးဟု ဆိုရပါမညျ။
ကြောကျရိုငျးတုံးလေးမြားကို ထိနျးကြောငျးပွုပွငျ သှနျသငျဆုံးမ၍ လိမ်မာယဉျကြေး အဖိုးတနျကလေးမြားဖွဈအောငျ နိစ်စဓူဝ ကွညျ့ရှုစောငျ့ရှောကျမှုကား အငျမတနျတာဝနျကွီးလေးပါသညျ။ ပညာရေးတဈခုတညျးအတှကျပငျ အခြိနျပေးဖို့ မလုံလောကျပါ။ အမွဲနေ ဆရာဆရာမမြား ရှားပါးခွငျး၊ လိုအပျလြှငျ လိုအပျသလို အဆငျ့မွငျ့ဆရာ ဆရာမမြား ဖိတျချေါ၍ အခြိနျပိုသငျပေးရခွငျး၊ ဂိုကျဆရာ ဆရာမမြား ရှာဖှရေခွငျးနှငျ့ပငျ စိတျပနျးလူပနျး ဖွဈခဲ့ရပါသညျ။
ပညာရေးအကယျဒမီ၏ ထူးခွားခကျြတဈခုမှာ ရှဈတနျး ကိုးတနျးမြားအား အင်ျဂလိပျစကားပွော (English Speaking) သငျတနျး ဘာသာရပျတဈခုအဖွဈ သီးသနျ့ဖှငျ့လှဈသငျကွားပေးနခွေငျး ဖွဈပါသညျ။
ပညာရေးအကယျဒမီဆောငျပုဒျမှာ “သာသနာ ပညာ ယဉျကြေးမှု၊ ကောငျး တျော ယဉျအောငျပွု” ဖွဈပါသညျ။ လူကောငျး လူတျော လူယဉျကြေးလေးတှေ ထှနျးကားစရေေး အဓိက ဖွဈပါသညျ။
ကောငျး တျော ယဉျ – အဖိုးတနျကလေးငယျမြား ထှနျးကားရေးအတှကျ အဘကျဘကျမှ ပံ့ပိုးကူညီ လှူဒါနျးထောကျပံ့ ပွုစုပြိုးထောငျ ထိနျးကြောငျးပွုပွငျပေးတျောမူကွသော မြိုးခဈြသံဃာတျောမြားနှငျ့ မြိုးခဈြပွညျသူမြားအားလုံးကို အထူးတလညျ ကြေးဇူးတငျဂုဏျပွုအပျပသေညျ။ ။
“2020 မစိုးရိမ်တိုက်သစ် စာဖြေသံဃာ အရုဏ်ဆွမ်းအလှူတော် (၁၅)”
မုဒိတာရပ်ဝန်း – ပညာရေးအကယ်ဒမီကျောင်းအလှူတော် (၂၄)